Casaan iyo Buluug, laba midab oo kaa dhigi doonta hal abuur iyo caqli badan | Abuurista khadka tooska ah
Casaan iyo Buluug, laba midab oo kaa dhigi doonta hal abuur iyo caqli badan
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad laba jeer ka fikirto kahor intaadan duqeyn boqolaal yuuro koorsadaada xigtaSaynisyahannadu waxay rumeysan yihiin inay jirto xitaa hab fudud oo lagu kordhin karo caqliga iyo hal-abuurka. Casaan iyo Buluug ayaa loogu yeedhi karaa tijaabada.
Cilmi-baareyaal ka socda Ururka Mareykanka ee Horumarinta Sayniska (American Association for the Advancement of Science) waxay ogaatay in kaliya labo midab oo aad la kulanto ay kaa caawin karto wanaajinta xusuustaada iyo awooda aad wax u cusboonaysiin karto.
Daraasad ay samaysay Juliet Zhu
Daraasad ay hogaamineysay Professor Juliet Zhu, kooxdu waxay u soo bandhigtay kaqeybgalayaasha howlo kala duwan oo looga baahan yahay inay noqdaan kuwo hal abuur leh ama feejignaan leh. Caqabadaha waxaa lagu sameeyay kombiyuutarada oo leh taariikh casaan ama buluug. Sidii ay noqotay, jawaabeyaasha ka shaqeynayay kombuyuutarrada asalkoodu casaanka ahaa waxay si fiican uga shaqeeyeen hawlo u baahan fiiro gaar ah, halka jawaab-bixiyeyaashii ka shaqeynayay kombuyuutarrada asalkoodu buluugga ahaa ay dhaliyeen laba jibbaar fikradaha hal-abuurka ah.
Ma cadda sababta ay midabbadaasi u leeyihiin shaqooyinkaas gaarka ahLaakiin kooxdu waxay leedahay aragti: "Waad ku mahadsan tahay joojinta calaamadaha, gawaarida gurmadka iyo qalimmada casaanka ee macallimiinta, waxaan la xiriirnaa casaanka khatarta, khaladaadka iyo taxaddarka," ayuu yiri Professor Zhu. Midabku, sidaas darteed, waxay ku kallifaysaa maskaxda inay fiiro gaar ah u yeelato oo ay u taxaddarto.
Dhinaca kale, buluugga xasilloon ayaa dadka dejiya oo wuxuu la xiriiraa dhiirrigelin togan.
«Sababtoo ah buluuggu guud ahaan wuxuu la xiriiraa furfurnaan, nabad iyo xasillooni, waxay u badan tahay inay kiciso dhiirigelin si loo gaaro, maxaa yeelay ururadani waxay muujinayaan jawi wanaagsan oo dadka ku dhiirrigeliya inay isticmaalaan dhibaatada hal-abuurka leh, kana soo horjeedda xeeladaha xallinta 'isku dayga iyo runta ah', ayuu raaciyay Zhu.
Kaliya qaadashada daraasaddan ayaa ah- Haddii aad rabto inaad si xeel dheer uga fikirto, iskuday inaad ku isticmaashid darbiga casaanka ah desktop-kaaga ama telefoonkaaga. Haddii aad rabto inaad maskaxda ka fikirto, gidaarka buluugga ah ayaa kaa caawin kara.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Casaan iyo Buluug, laba midab oo kaa dhigi doonta hal abuur iyo caqli badan
Dib-u-warshadaynta iyo kursiga dhuunta ee Christophe Machet
Shaqooyin hal abuur leh maalinta shaqaalaha caalamiga ah